အနုပညာ Archives - Page2of 117 - Myanmar News Market
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ လှူခဲ့ပါတယ်။ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတဆင့် သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်နဲ့ အတူ နေထက်လင်းတို့က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ရေး ဆေးပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ပရဟိတမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ နေထက်လင်းနဲ့ ဝေဠုကျော်တို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့အတွက် COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးတွေ အပြင် ကာကွယ်ရေး ဆေးပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” 25-8-2020 ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ပိုးသတ်ဆေး ဂါလံ (၆၅) နှင့် အဝတ် mask (၂၅၀) ခု ကို အရင်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သော ရခိုင်ကို ကူညီပေးနေသော သရုပ်ဆောင် ကိုနေထက်လင်း မှ ဥက္ကဌ...
သူ့ရင်ထဲက စကားတွေနဲ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။ ဇဏ်ခီကတော့ ထိပ်စီးပြောင်းသွားတဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီရဲ့ မွေးနေ့မှာ ချစ်ရတဲ့ ဇနီးချောလေး ခရစ္စတီးနားခီက အခုလို မွေးနေ့ဆုတောင်း စကားတွေ ပြောပြလာပါတယ်။ သြဂုတ်လ(၂၅) ရက်နေ့ကတော့ ဇဏ်ခီရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ ” Happy Birthday,My Love!! ပညာနဲ့ယှဉ်တွဲပြီးမှ လုပ်ရသောအနုပညာ၊ သစ္စာတရားနဲ့ယှဉ်တွဲပြီးမှ ရပ်တည်ရသော ခံယူချက်၊ မေတ္တာနဲ့ယှဉ်တွဲပြီးမှ ဝေမျှရသော ဒါနကုသိုလ် တို့ဖြင့်သာ ဘဝကို အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်…Love you so much!!” ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ(၂၅) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီကလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂၅) ရက်နေ့ မွေးနေ့ကတော့ သူ့ရဲ့...
သူကိုယ်တိုင် ထီလက်မှတ်တွေ လှူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုတော် ယုန်လေးကတော့ လူရွှင်တော် ဧရာနဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကျော်ထူးတို့ဆီက ဆန်နဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ ဝယ်ထားတာလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုတော် ယုန်လေးကတော့ လူရွှင်တော် ဧရာဆီက ထီလက်မှတ်တွေ၊ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကျော်ထူးဆီက ဆန်တွေ ဝယ်ပြီး ပရိသတ်အယောက်(၅၀၀) ကို လှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ ” 28 ၊ 29 ရက်နေ့ အလှူ အတွက် ကိုဧရာ ဆီက လူအယောက် (၅၀၀)စာ တစ်ယောက် (၃ စောင်) နှုန်းနဲ့ ထီလက်မှတ် အစောင်ရေ (၁၅၀၀) ၊ ကိုကျော်ထူး ဆီက ဆန် (၃ပြည်)အိတ်၊ လူအယောက် (၅၀၀ )စာ အိတ် (၅၀၀) အားပေးခဲ့ပါပြီ။ ကျန်တာတွေ ထပ်စီစဉ်နေပါသေးတယ်။ အလှူရှင် ထပ်တိုးရင် အရေတွက်...
Metro Brothers ကနေ ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဝါရင့် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် နှစ်ဦးရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့ရာ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် အရိုင်းမင်းက ရိုက်ကူးဖြစ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ကို ရိုက်ဖို့ ဖုန်းနဲ့ ချိတ်တယ်။ လူတွေ့ပြီး စကားပြောကြည့်တယ်။ လက်ခံနိုင်တာနဲ့ လက်ခံလိုက်တာ။ အဝတ်စားတွေလည်း သူတို့ပဲ ရှာပေးတယ်။ သူတို့ လိုချင်တဲ့ ပုံကို ကျနော်တို့က ရိုက်ပေးရတယ်။ ပထမရက်မှာ နှစ်ယောက်တွဲ ရိုက်တယ်။ ဒုတိယရက်မှာ တယောက်တည်း ရိုက်တယ်” “ကျနော်တို့ ပုံတွေလည်း မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ သူများပြတော့မှ ကြည့်မိတယ်။ ဒီပုံတွေ ရိုက်တာ ခက်ခဲမှုတော့ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့က အက်ရှင်အနေနဲ့ပဲ သရုပ်ဆောင်တာ။ အဲ့လို ပုံစံတွေ တခါမှ မရိုက်ဖူးဘူး။ ဒီကလေးတွေ ရိုက်လို့သာ ခွင့်ပြုလိုက်တာ။ ကျနော်တို့ အိုက်တင်တွေကို...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီနေတိုးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြည်တွင်းကူစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစက်တစ်လုံးကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်မနက် ဆယ်နာရီခွဲမှာ ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အသျှင်ကုမာရထံကို နေတိုးကိုယ်တိုင် လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်က မိန့်ကြားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက စစ်တွေ၊ မြောက်ဦးနဲ့ သံတွဲတို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြည်တွင်းကူးစက်သူပေါင်းဟာ ဒီကနေ့မနက် ထိ ၇၂ ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီ
အိမ်ရှေ့မှာစောင့်ပြီး အကူအညီလာတောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်ကို နိုင်သလောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်မှုရရှိလာတာနဲ့အမျှ အခြားသူတွေကိုပါလက်တွဲခေါ်ယူဖို့ ဝန်မလေးသူလေးကတော့ ဖြူဖြူထွေးပါ။ ခက်ခဲနေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနုပညာရှင်တွေကို သူရထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ထည့်သုံးပေးပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီနေသလို ကြော်ငြာရိုက်ကူးပြီးချိန်မှာလည်း ဂါဝရတရားရှေ့ထားပြီး ကန်တော့လေ့ရှိသူပါ။ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ မနေ့ကတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အလှူလေးကို ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ရိုက်ကူးရေးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း….. လေးလေးကအိမ်ထဲထိဝင်လာတယ်…. လေးလေး ဘာများပြောစရာရှိလို့လဲဆိုတော့? ကဒ်လေးပြပြီးအခက်အခဲ ဖြစ်နေကြောင်းပြောတယ်….. ဖြူဖြူလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ဖြူဖြူထွေးကတော့ တကယ်ခက်ခဲနေသူတိုင်းကို မညာဘဲနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကူညီဖို့ အသင့်ပါပဲလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေကြားလေ့ရှိသူပါ။ မနေ့ကတော့ ရှူတင်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အကူအညီလာတောင်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်ကို သူတတ်နိုင်သလောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလှူလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မိဘနှစ်ပါးအတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပန်းဖြူကတော့ အရိယာဝါသဓမ္မစင်တာမှာ ဆရာလေးမင်္ဂလဂဝေသီ ဘွဲ့နာမည်နဲ့ (၁၁) ရက်အကြာ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ပန်းဖြူနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့ဟာ ကလောမြို့မှာရှိတဲ့ အရိယာဝါသဓမ္မစင်တာ မှာ (၁၁) ရက်အကြာ တရားအားထုတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်ခဲ့ရတဲ့ ဝမ်းသာပီတိလေးကိုလည်း ပန်းဖြူက အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ ” ၁၁ ရက်တာဆရာလေးမင်္ဂလဂဝေသီ ဘဝတွင် လိုလေသေးမရှိ ဆွမ်းကျောင်း ပြည့်စုံစေသော၊ ရုပ် နာမ်တို့၏ အချိန်တိုင်း ဖြစ်ပျက် ပျက်ဆီးနေပုံကို သိရှိစေရန် ဝိပသနာဉာဏ် အလင်းပြပေးသော၊ သီလ သမာဓိ ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော ထေရဝါသဆရာတော်ကြီးများအား အနီးကပ်ဖူးမျှော်ခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးသော၊ ကျေးဇူးကြီးမားလှပါသော ကလောမြို့ အရိယာဝါသဓမ္မကျောင်းတိုက်မှ ဆရာလေးဒေါ်နိမ္မလ(ခ) အသောကစာရီအား ရှိခိုးဦးတင်ပါတယ် ဘုရား။ ဆရာလေး လမ်းညွှန်သင်ပြပေးမှုအတိုင်း ကြိုးစားပြီး...
ပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်တိုင်းကို ဖခင်အတွက်အမျှဝေလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
သူ့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်အတွက် သူမရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဖခင်ကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၈) ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထက်ထက်မိုးဦးက ပရိသတ်တွေဆီကို ရင်ဖွင့်စကားဆိုထားပါတယ်။ ” အငိုမတိတ်ရတဲ့ သံသရာမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် နေဖို့၊ ဖခင်ကြီးအတွက် ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိစေဖို့ န ဟိ ရုဏ္ဏံ ဝါ သောကော ဝါ, ယာ စညာ ပရိဒေဝနာ၊ န တံ ပေတာနမတ္ထာယ, ဧဝံ တိဋ္ဌန္တိ ဉာတယော။ အယဉ္စ ခေါ ဒက္ခိဏာ ဒိန္နာ, သံဃမှိ သုပ္ပတိဋ္ဌိတာ၊ ဒီဃရတ္တံ ဟိတာယဿ, ဌာနသော ဥပကပ္ပတိ။ လို့ဟောတဲ့မူတဲ့အတိုင်း ငိုနေလို့ အကျိုးမရှိတဲ့ ဒီလောကဓံမှာ အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်...
ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ဒီကနေ့ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမှာ ပါဝင်သူ အနုပညာရှင်တွေကို ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းကပွဲကတဆင့် ပရိသတ်တွေသိလာကြတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက ယခုဆိုရင် ကြော်ငြာပေါင်းမြောက်မြားစွာကိုရိုက်ကူးနေရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖြူစင်ပွင့်လင်းတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့်လည်း အားပေးသူပရိသတ်တွေ ဆထက်တပိုး များပြားလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဖြူဖြူထွေးက သူမကို လာရောက်အပ်နှံတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို သူမကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကြော်ငြာမှာလည်း အနုပညာရှင်အချို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ရိုက်ကူးလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုအနုပညာရှင်တွေကိုလည်း တဖန်ပြန်ပြီးတော့ ကန်တော့လေ့ရှိတာကို ပရိသတ်တွေလည်း မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ယခုလက်တလောမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာခေါ်ရိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်အချို့ကြားမှာ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုလေးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့် ဖြူဖြူထွေးက ဒီကနေ့ရိုက်ကွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်အချို့ကို ကန်တော့ရင်း စိတ်ထိခိုက်မျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။ သူမအတွက်တော့ “ပီတိဆိုတာ ဝယ်ယူလို့မရသလို လုပ်ယူလို့လဲမရဘူး” လို့ သူမရဲ့ခံယူချက်လေးကိုပါ ရေးသားထားခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့ စိတ်ထားလေးကို ချစ်ပြီး သဘောကျတယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေးပေးပြီးအားပေးသွားကြပါဦးနော်။ ဝီလက်ဖ်ဆယ်လီ
ပရဟိတအလုပ်လေးတွေ ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ယုန်လေးကတော့ လမ်းဘေးမှာ သစ်သီးရောင်းနေရတဲ့ အမေကြီးတစ်ယောက်ကို ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ငွေ လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးလေးတွေ ပြန်လုပ်ခွင့်ရလာတဲ့ အပေါ် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သူရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခွင့်ရပြီလို့ သူကဆိုပါတယ်။ ” မနေ့က အလုပ်လေးတွေ ပြန်စရတယ်။ ရရချင်း လှူချင်တာနဲ့ Cb ကညီလေးတစ်ယောက်ပို့ထားတဲ့ Link ကိုဝင်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်းသွားတယ်။ နဂိုထဲက မှ စိတ်က သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ တွေ့ရင် စိတ်သိပ်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော် မရှိတော့တဲ့ အဘိုးအဘွားပဲ မျက်လုံးထဲ မြင်မြင်နေတာ။ အဖွားကိုလာ လှူတာ တက်နိုင်သလောက် (၁)သိန်း၊ ညီမလေး မြတ်နိုးဝေက (၅သောင်း ) ပါ ၊ ဒါပေမယ့် တွေ့တဲ့ လူတွေ ကျွန်တော်မှာပါတဲ့ (၅သိန်း) လိုအပ်တယ် ထင်လို့...